Ku biir kooxda WhatsApp ee Shaqooyinka ee Dubai, Karriin, Raadinta UAE
Ku biir kooxda WhatsApp ee Shaqooyinka ee Magaalada City
Shaqooyinka ka tirsan kooxda WhatsApp Dubai
Tilmaam dhammaystiran oo loogu talagalay u guurida Dubai ⭐⭐⭐⭐⭐
Published by Shirkadda Dubai City at October 22, 2017
Ku biir kooxda WhatsApp
Shirkadda isgaarsiinta ee 'WhatsApp' ee Dubai
Ku biir Kooxda WhatsApp ee Shaqooyinka in Dubai. Ku soo DHAWOOW oo bulshada u fasaxaya shaqooyinka Gacanka. Haddii aad raadineyso shaqo bannaan. Shirkadda shaqaalaynta ayaa halkan ku taal adeegga Yurub sidoo kale. Kooxdayada khabiir ku ah fursadaha shaqada. Waxay ilaaliyeen dhowr WhatsApp kooxaha khaliijka. Waxaan sidoo kale nahay bogga ugu caansan ee UAE si loo helo shaqooyinka Whatsapp-ka ee gubta. Weligaa ma waxaad la timid Khaas Dubai City Whatsapp Group. Xaaladahan oo kale, mid kasta Xubnaha WhatsApp wadaagaan dalabaadka hadda jira ee UAE. The Suuqa shaqada ayaa isbeddelay Dubai. Maalmahan goobaha shaqooyinka ee aan ku siinin damaanad ah in ay ku leeyihiin furitaan shaqo ee Dubai City.
Ku biir kooxda WhatsApp Shaqooyinka Dubai!
WhatsApp Xirfadda Facebook waa mid ka mid ah qalabka ugu fiican ee loogu talagalay dadka shaqo doonka ah ee Dubai. Noqo qof farxad leh oo ka mid ah adeegyadayada Dubai. Waxaannu bilawnay xiriir kooxeed oo loogu talagalay dadka shaqo doonka ah ee Whatsapp ee Bariga Dhexe. WhatsApp waa mid ka mid ah warbaahinta bulshada ee ugu caansan codsi. Waxaa loogu talagalay dadka raadinaya inay la xiriiraan kuwa kale. Shirkadda Dubai City abuuray bulshada telefoonnada gacanta oo loogu talagalay dadka ajnabiga ah.
Shaqada telefoonka gacanta ee Dubai
Ku biir kooxda WhatsApp ee Shaqooyinka ee Dubai
Dhinaca dhinaca wanaagsan, ujeedkeenu waa in aan dadka ku kala dhexgalno adduunka oo idil. Iyo sidoo kale dhiso shaqo-helaha ugu fiican ee UAE. Ku biir beel ka mid ah telefoonka gacanta shaqo doonka ah kuna xidhna in kabadan hal milyan oo qof bartayada shaqada. Xaaladahaas oo kale, waad la wadaagi kartaa CV-gaaga iyo warqadda daboolka ah ee ku saabsan shaqaaleynta UAE. Waad awoodaa Sidoo kale weydii fikradaha. Intaa waxaa dheer, sida loo doorto shaqooyinka bannaan ee Bariga Dhexe. Waxaanu abuurnay kooxo ka badan kooxaha shaqooyinka 20 gaar ahaan laga sameeyay qaybaha shaqo raadinta ee Dubai.
Tani waa "WhatsApp ee Dubai". Kooxda Ammaanka ah ee WhatsApp si gaar ah loogu wadaagayo bixinta shaqooyinka. Iyada oo muuqaalada cusub, waxaad awoodi doontaa inaad ku darto lambarka taleefoonka ee WhatsApp ee beesheena. Kooxdayada aan ku siineyno waxaa lagugu martiqaadi karaa xiriirka fudud si aad u hesho saaxiibo cusub iyo sidoo kale maareeyayaasha shaqaalaynta oo aad sameysaan asxaabtaada koox ahaan. Tusaale ahaan, waxaa jira wax badan Kuwaitta Kuwait iyo magaalada Dubai. Sababtoo ah Dubai oo ku taala Imaaraadka Carabta ayaa wali ah kuwa ugu wanaagsan ee ajnabiga ah. Marka la eego shaqo raadinta murashaxiinta, annagu waxaan nahay ka caawinta inuu u guuro Dubai.
Yaa ku biiri kara kooxaha HR WhatsApp?
Qorayaasha iyo Hawl-hayayaasha Ha'yada ee UAE: Inaad wadaagto shaqooyinka furitaanka.
Job seekers: Si aad u ogaato shaqo furitaanka Dubai.
Dadka jira raadinta shaqooyinka Dubai 2018 iyo 2019
Shaqaalaha xirfadlayaasha ah ee Dubai waa: waxay la wadaagi karaan resumeylka qorayaasha.
Qof kasta oo aan jeclayn diiwaangelinta internetka oo midba midka eegaya guji si aad ula xidhiidho maamulayaasha kireysiga.
HR Directors: si aad u hesho dalabyada hadda iyo qof kasta oo raba in uu sii joogo.
Job seekers kuwaas oo runtii magaalada caasimadda iyo raadinta shaqo ee Dubai.
Ku soo biir fikirka taleefankaaga hoos ku xusan Whatsapp Group.
Gacanta dalxiisayaasha doonaya inay xiriir la yeeshaan maamulayaasha kireysiga.
Khudbado ka socda dhamaanba Imaaraadka Carabta.
Ku biir kooxda WhatsApp ee Shaqooyinka ee Dubai!
Kooxda Gulf Jobs WhatsApp
WhatsApp Our ururinta cajiib ah ee kooxo shaqooyinka WhatsApp kala duwan. Dhinaca wanaagsan wuxuu caawiyaa madaxda badan si ay u helaan xirfad wanaagsan. La kulan cusub WhatsApp saaxiibadood oo sidoo kale raadinaya shaqo Gacanka iyo xiriir maalin kasta. Si aad uhesho qaab kale, marna garan mayso cidda kaa caawin karta inaad hesho boosas cusub. Ama xataa ayaa kuu soo diri doona talooyin ku saabsan shaqo raadinta. WhatsApp wuu ku fiican yahay Shaqooyinka bannaan ee Emirates waxaad hadda bilaabi kartaa. Dhinaca kale, haddii aad shaqo raadinayso dibadda. Waa inaad sidoo kale fiirisaa shirkadaha shaqaaleynta. Shirkadda ugu fiican ee Careerjet ee Dubai iyo Shaqo wacan oo loo yaqaan shaqaale bog ah oo loo yaqaan 'Monster Gulf'. Waa runtii u qalantaa inaad dalbato Resume.
Ku biir Gulf Jobs Kooxda WhatsApp
Ha lumin shaqadaada gudaha UAE
Digniin loogu talagalay dadka shaqo doonka ah ee dalka Isutagga Imaaraatka Carabta Emirates. Xaashi dhowaan ka soo baxday Huffington post oo la dagaallamaya shisheeyaha cusub Miyuu waligaa ka fekereynin inaad waaya-aragnimadaada ku lumiso UAE! Gaar ahaan haddii aad tahay Indian shaqo doon, waxaad u baahan tahay inaad taxaddar muujiso. Haddii aad raadineyso inaad noqoto shaqaale shirkad wanaagsan oo ku jira United Arab Emirates. Waad ubaahantahay si ay u noqoto mid caqli ku filan oo ogtahay sida loo maareeyo.
Haddii aad raadineyso boosaska bannaan ee magaalada Dubai. Intaad ku sugantahay booqashada iyo raadinta shaqo ku saabsan fiisada booqashada. Inkastoo aad ka baxsan tahay dalka hooyo tusaale ahaan Hindiya. Waxaana heley shaqo cusub oo laga helo shirkad qaar ka mid ah Hindiya. Iyo a shaqadu aad ayay u fiicnaayeen oo waxay isku dayayaan in ay kordhiyaan xirfadaha. Sidaas darteed haddii aad u guurto Hindiya. Kadibna waxaad u dirtay warqad istiqaalad ah oo loo diray shaqo-bixiyaha Dubai, iyada oo la aqbalo warqad istiqaalad. Ka dib haddii cidda aad u shaqayso u dirto ogaysiiska dawlada. Inaad ka soo tagtay UAE si sharci darro ah markaad dib u soo noqoto waa la xirayaa.
Mashruucyada New Expo 2020 iyo fursadaha shaqada
Shaqooyinka cusub waxay ku soo biireen Gacanka. Iyo shaqooyinka cusubi waxay u yimaadaan qiimaha Expo 2020 gudaha Dubai. Mashaariicda horumarineed ee Dowladda la xiriirto. Waxay ahayd furay shaqo cusub oo loogu talagalay dadka haysta waxbarashada MBA. Dhinaca wanaagsan, horumarinta cusub ee UAE ayaa soo kordha. Sida xaqiiqda dhabta ah, mashruuca Dhoofinta ayaa horeyba ugu dhufatay $ 33 maalgashi, sida lagu sheegay warbixin cusub oo ka soo baxday Dubai iyo Abu Dhabi bogagga dowladda.
Tirada maalgashiga ee Expo waa mid aad u weyn. Gaar ahaan marka la fiiriyo maalgashiga la xiriira mashruuca. Expo si tartiib tartiib ah ayey u imaaneysaa sida Imaaraatka ugu wanaagsan maal-gashiga. Kaliya saddexdii sano ee u dambeysay ayaa u haray mega shaqo raadinta adduunka ee mega. Dabcan, dhacdadani la xiriirta shaqada oo bilaabmi doonta Oktoobar 20, 2020. Codsadayaasha cusub ayaa helay codsiga. Ujeedada helitaanka Talo ku saabsan sida loo helo suuq-geynta suuqa shaqada ee Dubai.
Iyadoo aan adeegsanayno Whatsapp Xiriirka Xirfadaha Xirfadaha ee Gulf Offices. waad awoodaa shaqo hel gudaha Expo 2020. Waxaa intaa dheer, cilmi baarista mashruuca cusub ee muujineysa in sidoo kale WhatsApp la xiriiri doono tan. Malaha waxaad ka fikireysaa sidee? Hadda suuqa taleefoonka gacantu wuxuu ku korayaa UAE. La soco wixii cusub Carabta Carabta oo ka hadlaya sheekooyinka WhatsApp ee Dubai. Gudaha cusub ee casriga WhatsApp, waxaad sameyn kartaa wax badan. Codsigaan moobiilka waxaa maamula maamulayaasha sirdoonka iyo dadka mashruuca la xiriira ee sidoo kale ka socda Facebook.
Shaqooyinka la xiriira mashruuca Expo ee WhatsApp
Bixiyaha fursadaha cusub ee UAE. Sida caadiga ah madaxda sare ee dowladda ayaa sheegay in mashruuca $ 33-35 uu yahay. Taas bedelkeeda, waxaa ka mid ah shaqo ee shaqaalaha shaqaalaha Philipino iyo mashaariicda la xiriira shaqaale Koonfur Afrika ah oo shaqaaleysiisay Dubai. Sidaas darteed shaqooyin banaan oo caalami ah oo cusub ayaa la wadaagaya kaabayaasha gaadiidka. In kasta oo tani ay run tahay in ka badan 40,000 boosaska cusub ee la siin doono dadka waayeelka ah ee caalamiga ah.
Mashruuca Expo iyo WhatsApp oo wada shaqeynaya. Waxaa intaa dheer xitaa maalin walba sii kordhaya. Sababtoo ah in ka badan xubnaha 200 ee kooxda WhatsApp ayaa masuul ka ah inay gudbiyaan farriimaha ku saabsan dadka isticmaala milyanka 55 ee telefoonka gacanta maalin kasta Whatsapp World Gov Summit mashruuc. Iyadoo ujeedkani, WhatsApp ayaa sii kordhaya ilaa hal bilyan oo isticmaalaya maalintiiba. Taasi waxay noqon doontaa heshiis aad u wayn oo lagu shaqeynayo.
Dunida Carabiga sida si fiican ayaa loo shaqaaleysiin doonaa qowmiyado kala duwan oo loogu talagalay mashruucan gaarka ahs. Laakiin maaha in la sheego boosaska bannaan ee ku yaala Expo 2020. Dukumiintiga ganacsiga ee la xidhiidha mashruuca. Iyo sidoo kale marti-galin waqti-gaaban ah Expo 2020 shaqooyinka mashaariicda cusub ee Dubai. Dhammaantood waxay yimaadaan mid ka mid ah booqashooyinka caalamiga ah ee Imaaraadka Carabta.
Kooxda WhatsApp ee Dubai ee qurbaha
Kooxda WhatsApp ayaa ka muhiimsan maareeyaasha kale ee isgaarsiinta. Kooxda WhatsApp sifooyinka ayaa loo oggol yahay Shaqaale Indian ah oo ka shaqeeya Imaaraadka si loo helo Jobs in Dubai. Wax kasta oo dhacaya maalmahaas la yaab leh badan oo ka mid ah dadka isticmaala fudud oo la isku halayn karo raadinta shaqo ah Bariga Dhexe. Hadda, inta badan dadka ajnebiga ahi waxay ku biiri karaan kooxdayada shaqooyinka. Job seekers kuwaas oo doonaya in ay ka shaqeeyaan Dubai.
Dhinaca kale, illaa hadda qof kasta wuu awoodaa dalbashada shaqooyinka bannaan ee dibadda. Intaa waxaa dheer u dirista CV-ga ujeedkeena rasmiga WhatsApp. Xitaa uma baahnid inaad booqato caasimada UAE. Kooxdayada WhatsApp ee shaqo doonka ee UAE. Waxay ogolaaneysaa martida cusub inay la xiriiraan maamulayaasha shaqaaleynta. In kastoo tani run tahay, run ahaantii, qof kastaa wuu awoodaa ka noqoshada Imaaraadka Carabta.
Haddii ay dhacdo inaad rabto shaqo inay si dhakhso ah u bilawdo isticmaalka adeegga WhatsApp. Waxaad u baahan tahay inaad sameyso sax. Diyaarso Resume. Sababtoo ah maalmahaas xitaa waxaan xitaa ka caawineynaa dumarka ku sugan Dubai. Sidoo kale, samee warqadda daboolka ah ee la yaab leh waxay kaa caawineysaa inaad hesho booska banaan. Markaas haddii aad wax kasta oo sax ah gacantaada ku haysato. Isku xiro shaqaale qorayaal ku saabsan shaqooyinka saliidda iyo gaaska ee WhatsApp. Oo iyaga weyddii shaqooyinka bannaan ee Dubai.
Dalka UAE waa isudiir fikradaha ganacsiga ee todoba emirate. Isla mar ahaantaana aad sameysid Cusbooneysiinta Whatsapp, waxaad la hadli kartaa qof kasta oo adduunka ah bilaash. Sure, waxaa jiri doona dad ku jira WhatsApp. Yaa doonaya Xaqiiqdii waxay kaa caawineysaa habka shaqo raadinta ee Emirates 7?. Laakiin habka taleefanka gacanta aad ayey u fududaan doontaa inaad shaqo hesho taleefanka gacanta.
Whatsapp ee xawaare ku helid Job in Dubai
Whatsapp for Android Hadda waxay kor u kacdaa in ka badan bilyan halkii milyan oo dad ah ee ku baahsan wadamada 3. Waqtiga fog, waxaa ka badan shirkadaha 195 isticmaalaya Xaaladda khaaska ah ujeedada adeega qorista ee Sacuudi Carabiya. Hadda waxaad isticmaali kartaa WhatsApp si aad ula xiriirto liiskaaga si aad ula xidhiidho maaraynta khayraadka ee Dubai. Iyadoo ujeedkani yahay, waxaad ku dari kartaa lambarka taleefankaaga si ay ula xiriiraan shaqaaleysiinta Abu Dhabi.
Guud ahaan wadahadalka bilawga ah ayaa bilawga laga bilaabo Dubai maalin kasta. App Whatsapp ee mobile iyo Whatsapp for daaqadaha ma aha oo keliya lacag la'aan laakiin sidoo kale waa la heli karaa kobcintaada asaasiga ah adigoo ah qaran caalami ah. Saldhigyada booqdeyaashayada Google. Waxaan dhihi karnaa dadka shaqo raadinaya. Guud ahaan marka laga hadlayo, helitaanka fursado cusub. Dabcan, waxaad u baahan tahay inaad dameerkaaga kor u qaaddo. Laakiin taas badalkeed, waxaad lahaan doontaa a fursada shaqo ee laga helo UAE. Kaliya adigoo fariin telefoonka gacanta.
Ku biir kooxda WhatsApp ee Shaqooyinka ee Dubai oo bilaabi shaqo raadinta UAE. Faahfaahintaada ku dar kooxaha WhatsApp, fursadaha shaqooyinka ee Imaaraadka Carabta waxaa lagu qorayaa telefoonka gacanta. Rasmiga Whatsapp wuxuu u yahay qalab shaqo raadinaya UAE. Whatsapp for daaqadaha, waxaa jiri doona dad ku caawin kara jidka. Fadlan raadinta shaqo ee Bariga Dhexe ma fududa. Laakiin shirkaddayada ugu yaraan waxaad awoodaa Usheega qorayaasha inay kugu caawiyaan inaad hesho shaqo.
Waxaa jira goobo shaqo oo badan, laakiin kaliya shirkadda Dubai City ee dhabta ah ee maareynta adeegyada shaqo ee WhatsApp. Ku biirida kooxda WhatsApp waa mid sahlan. Hal guji oo waxaad cusbooneysiin kartaa qorayaasha. Inaad diyaar u tahay inaad u guurto UAE. Ku biir kooxda WhatsApp ee Shaqooyinka ee Dubai !. Iyo kooxdayada ayaa waxay kaa caawineysaa inaad noqoto dalxiiska Dubai.
Ku soo biir bulshada beesha caalamka
Digniin u raadso shaqaale caalami ah. Gaar ahaan kuwa ka yimid dalalka Khaliijka. Waxaan halkan u joognaa inaan kaa caawino sidii aad u gaari lahayd bulshada caalamka shaqooyinka. Fadlan ku soo biir kooxda Whatsapp ours fursadaha shaqada ee suuqa shaqada. Waxaan haynaa dhawr shirkadood oo shaqaaleysiinaya 2018 iyo 2019. Intaa waxaa dheer, shaqaaleysiinta kuwaas oo ah raadinta musharrixiinta shaqooyinka bannaan ee saliidda iyo gaaska. Isticmaalida adeegyadeena WhatsApp ee kooxda.
Waxaan halkan u joognaa inaan caawino qof walba oo aan awoodno. Ujeeddadeenu waa sidoo kale waxay kaa caawineysaa inaad ku qorto qorayaasha ee IT. Iyaga oo la wadaagaya maamulayaasha kireysiga iibka iyo suuq-geynta. Falanqeeyayaashu waa inay ka shaqeeyaan sidii ay u dhistaan ​​bulshadooda ganacsi ee Dubai oo ku salaysan suuqa shaqada si ay u sameeyaan sheekooyin xirfadeed Qodob kale oo muhiim ah markaad ku biireyso WhatsApp Group. Waxaad awoodi doontaa inaad muujiso inaad rabto si ay shaqo ugu hesho Mumbai.
Qalinjabin cusub ayaa sidoo kale heli kara boosaska banaan
Waxaan leenahay qaar ka mid ah macaamiisha qorista ee caalamiga ah. Inta badan maamulayaasha shaqaaleynta ee soo diraya xayeysiinta qorista. Waxay dhammaantood doonayaan inay shaqaaleeyaan cusub shaqaale caalami ah oo loogu talagalay qeybta bangiyada ee Dubai. Intaa waxa dheer, waxay rabaan inay u shaqaaleeyaan musharrixiin firfircoon shaqada si ay dibadda ugu dhoofaan Dubai Haddii aad tahay shaqo raadiye caalami ah. Waxaadna eegaysaa inaad bedesho qaab nololeedkaaga caadiga ah. Adiga ayaa laguu dejin karaa aduunka Shaqooyinka bannaan xitaa la Google ee Dubai. Ardayda cusub ee u qalma MBA ayaa isla markiiba ku biiri kara.
Ku biir kooxda WhatsApp ee Shaqooyinka ee Dubai !. Maanta oo noqo dalxiis caalami ah.
Tusaale ahaan, haddii aad tahay oo hadda ka shaqeeya Hindiya oo doonaya in ay u guuraan Dubai. Shirkadan ayaa hubaal kuu ah. Waxaan dadka ka dajineynaa heerarka ugu hooseeya heerarka sare ee loogu talagalay banaanbaxyada banaan ee ku yaalla UAE. Waad raadin kartaa waaxyo kasta sida banaanbaxyada wax soo saarka ee Dubai. Noocan ah Xirfadaha waa sahlan tahay in la helo.
Inaad Bulsho shaqo samayso ku noqoto Dubai
Si kastaba ha ahaatee shaqooyinka HR ee caalamiga ah iyo boosaska maamulka. Wakhti yar qaado. Dhinaca kale, kooxaheennu waxay si fiican uga shaqeynayaan sidii ay kuugu caawin lahaayeen R & D oo ku yaal dhul-gariirka, jasiiradaha ku yaala a shaqo raadiyaha Dubai. Xitaa waxaad ka shaqayn kartaa iibka & suuq-geynta iyo maareynta amniga. Faahfaahintaada faahfaahin dheeraad ah ee ku saabsan goobaha raadinta shaqooyinka banaan. Kaar lambarkaaga telefoonkaaga oo ah mihnadda riyada ee UAE. Adigu waxaad tahay hal guji si aad ugu biirto ganacsiga WhatsApp Dubai fursadaha shaqo ee kooxda Pakistan.
Rajadaadu waxay noqon doontaa maalinta nasiibka ah oo aad ku biiri doonto kooxda WhatsApp. Iyo guud ahaan, adiga ayaa lagu dari doonaa kooxda oo la dhigayaa oo loogu talagalay banaanbiyada baniaadaniga ah ee ka shaqeeya UAE. Dhanka kale, macluumaadkaaga shaqada waxaa dib u eegi doona waaxda shaqaalaynta. Iyo masuuliyiinta shirkadaheena Tababaraha kooxda si toos ah ula soo xiriir si aad shaqo u hesho. Anaguna sidoo kale ka caawinta dadka Pakistan inay helaan xirfad ku yaalo Emirates. Xaqiiqda dhabta ah, in ay gaaraan wakiillada shirkada iyo booqo caasimadda UAE.
The Xirfadda Dubai waa wax walba oo ku saabsan hab nololeedka riyada dhanka kale waad heli kartaa. Inta aad ubaahantahay arintaa waa wax aad u xun inaad aad ugu dadaasho sidii aad ku heli lahayd ugana gudbin lahayd Wareysiga. Nolosha Emirates waxay caan ku tahay caan. Qiimo badan baabuur iyadoo dadka waaweyna ay gacan ka geysanayaan dhiirrigelinta booqdayaasha cusub. Gaar ahaan kuwa jeclaan lahaa inay sii joogaan Imaaraadka Carabta.
Waxa ugu xun intaad ku qorto wareysiga iyadoo tan maskaxda lagu hayo isku day inaad noqoto mid hanuunsan. Gaar ahaan habka wareysiga cusub. Sida loo maareeyo xaaladaada maskaxda. Hadana sii raadso macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan shaqooyinka banaan iyo shaqooyinka banaan. Gaar ahaan kuwaan leh Wareysiga socodka. Aad bay u yihiin wanaagsan ee loogu talagalay dadka ku cusub ugxanta.
Waa maxay sababta aad u dooran lahayd aagga magaalada Dubai?
Tobankii sano ee la soo dhaafay, Dubai waxay gaadhay magaca riyo dhaqaale. In kabadan 70,000 dhererka hoteelada iyo mashaariicda cusub. Ka dhigista magaaladayada sida ugu booqashada adduunka ugu soo booqda ee qof walba. Waxaa jira dhowr sababood oo ah inaad u tixgeliso Dubai sida fasaxaaga ama goobta shaqada. Hase yeeshee inteena badan martida oo isticmaalaya shirkadda Dubai City maxaa yeelay waxaan awoodnaa inaan ku siino a shaqo gacan ku caawinta.
Capitol of UAE waa xarun ugu weyn ee e-ganacsiga ee gobolka gobolka Gulf. Xaqiiqdii, fikrad ahaan ma aqbali doonto in la yiraahdo Dubai waa riyada dahabka ee Imaaraatka. Sababta oo ah tan meel waxaad ka iibsan kartaa dahabka mashiinka ATM. Gold waa muhiim sababtoo ah waxaad ka heli kartaa habka kombiyuutarka ee Telefoonada gudaha meel kasta oo ka tirsan Abu Dhabi. Qodob kale oo muhiim ah oo leh mashiinka dahabka ee ATM waa suuq lacageedka oo cusbooneysiiya qiimaha dahabka ee kasta 10 kasta. Soo dejinta macluumaadka suuqyada maaliyadeed. Iyo iyaga si loo helo suuqyo caalami ah oo caalami ah.
Xitaa tan markaa, waxaad awoodi doontaa inaad lacag sameyso gudaha magaalada. Sida sawirada Carabta, qof kasta oo soo booqda cusub wuxuu u qalmaa khibradaas. Haddii aad dhamaanteed u qorsheyneyso fasaxa xiga, waa kuwan sababaha ugu waaweyn sababta aad u soo qaadatay Dubai si ay u helaan khibrad xasaasi ah.
Maxay xirfad cusub u bilaabi doontaa Bariga Dhexe?
Haa, waad ogtahay wax kasta oo ku saabsan WhatsApp xaq? Laakiin sababta ay xaqiiqdii u qalantaa in lagu tijaabiyo boosaska bannaan ee Bariga Dhexe? Bariga Dhexe, oo ay la socdaan Qatar iyo Saudi Arabia, waa goob lagu kalsoonaan karo ee shaqo doonka caalamiga ah. Gaar ahaan loogu talagalay cusub cusub oo qalinjabiyey kuwaas oo doonaya in ay bilaabaan qaab nololeed sare oo sareeya. Tusaale ahaan, intaad jaamacada wax ka baratay, meeleyntu waxay ahayd hab fog.
Laakiin markaad waxbartay. Ardey kasta ma riyoodo bilow shaqo sida macallin ku yaal Dubai ama Abu Dhabi. Tusaale ahaan, waxaa jira sharci yar shaqaaleysiinta kuwaas oo bixinaya la-talin shaqaale shaqaale caalami ah. Tusaale ahaan, Dawladda Abu Dhabi warshad wuxuu dalbanayaa shaqaale xirfad leh. Si aad ah loo barto waayoaragnimo badan oo ka mid ah dhowr goobood.
Dhinaca kale, badi ardayga riyadiisa ah oo ka shaqeynaya Ferrari. Dhab ahaan, ma aha adeeg kasta oo ka caawiya sidii ay u heli lahaayeen shaqooyin bannaan oo si fiican u shaqeeya oo ku jira suuqa shaqada ee dibadda. Dhinaca xun, adeegyada la-talinta meeleyntu maaha qof shaqaaleysiiya. Xitaa waad ku xaqiijin kartaa dadka kale ee leh kulamo internet ah.
Xitaa tan iyo markii ay shaqaaleysiinayeen maamuleyaasha shaqaaleynta ee shaqada wadata. Iyo urur cusub oo shaqaalaysiiya shaqaalaha maxalliga ah. Iyada oo loo goynayo qarashaadka ku wareejinta dad cusub shirkadohooda. Xaaladahaas oo kale, macaamiisheena cusub ayaa ah shaqaalaynta xirfadlayaal tababaran. Dhinaca taban, to Wuxuu gaaraa suuqa ganacsiga Bariga Dhexe waxaad u baahan tahay inaad khibrad u yeelato warshadaha kala duwan. Waxay u badan tahay Ph.D. ama shaqooyinka maamulka MBA ee waxbarashada. Kuwa ugu wanaagsan ee xirfadda UAE waa a Europe ama aqoon-korodhka Maraykanka si kastaba ha noqotee khibradda ugu fiican ee kaa caawin doonta inaad degto booska cusub waa Yurub.
Gebogebada WhatsApp Dubai
Falanqaynta ugu dambeysa ee loogu talagalay ujeedada qorista Xirfadaha Dubai iyo Abu Dhabi. Fadlan la wadaag fikradahaaga gaarka ah. Your qaybaha maqaalladasi ay u caawiyaan dadka kale. Waxaan rajeyneynaa in shirkaddayadu ay awood u yeelan doonto in ay gaaraan himilooyin xirfadeed oo loogu talagalay shaqaalaheenna shaqo ee UAE ee Linkedin. Shirkadda Dubai City waxay had iyo jeer ku faraxsan tahay markaan cusub ee soo booqda resume. Waxaan nahay isku day inaad siiso gacan qabasho mustaqbalka fog.
Iyo mid kasta oo cusub si ay u doortaan xirfadlayaal doonaya booqo hagaha magaalada. Waxay awood u leedahay in ay la wadaagto faahfaahinta shaqooyinka sida horeba loo xusay. Dabcan sida nooca Facebook iyo Linkedin. Ha wakhtiin waqtigaaga kuna biir kooxda WhatsApp ee Shaqooyinka Dubai. Waqtiga fog, waa u qalantaa.
WhatsApp waa qalab lagu helo shaqo. Waa in aad si daacad ah u isticmaashaa oo aad ixtiraam weyn u yeelataa abuurayaashooda. Taas macnaheedu waa, waayo-aragnimadaada xirfadeed xaqiiqdii waxay kaa caawineysaa inaad bilowdo shaqo. Waxbarashadaada iyo xirfadahaaga ciyaaraha kaalin weyn. Iyo haddii aad qaadato markiiba. Waa inaad haysataa shaqaale xirfad leh. Haddii aad u maleyneyso inaad tahay mid ka mid ah. Soo-dejinta xirfadlahaaga shirkadeena. Iyo sugaashada xayawaanka.
Marka loo eego xaaladahaas oo dhan marxalad kasta oo ku taal Bariga Dhexe. Guud ahaan, waxaad rabtaa si aad u hesho a Shaqada Dubai Nasiib wanaag waan joognaa halkan!
Ku biir kooxda ugu wanaagsan ee raadinta xirfad shaqo ee UAE. Ka dib fadlan Resume Resume oo ah magaalada ugu dhaqsaha badan aduunka!
Ku biir kooxda WhatsApp ee Shaqooyinka Dubai, Shaqada, Ka raadinta UAE.
Hagaag, maadaama aan bixinno wax wanaagsan hagayaal ee Shaqooyinka Dubai. Kooxdayadu waxay go'aansadeen inay ku daraan macluumaadka luqad kasta anaga Dubia way soo baxday. Sidaa darteed, arrintan maskaxda ku haysa, waxaad hadda bilaabi kartaa raadinta hagayaal, talooyin iyo shaqo ku yaal Imaaraadka Imaaraadka Carabta leh luqadaada.